प्रचण्डको साथ छाड्नेको लस्कर, संकटमा 'सुप्रिमो' !
२०४४ सालको सेक्टर काण्ड घट्दा अहिलेका ‘प्रचण्ड’ त्यतिबेला छविलाल अर्थात पुष्पकमल दाहाल जम्मा ३४ बर्षका थिए । सेक्टर काण्डपछि नेकपा मशालका महामन्त्री बनेका प्रचण्डले नेकपा मशालपछि २०७८ सालसम्म आईपुग्दा आधा दर्जन पार्टीमा मुख्य भएर नेतृत्व गरे ।
यसबीचमा कति नेतालाई उनले छाडे र कति नेताले उनलाई छाडे त ? यो रोचक विषय हुनसक्छ ।
यतिबेला नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०४७ सालमा नेकपा एकता केन्द्रका महामन्त्री थिए । लगत्तै २०५१ सालमा उनी नेकपा (माओवादी)को महामन्त्री भए । नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ देखि शुरु गरेको १० वर्षे जनयुद्धकै बीचमा २०५७ सालदेखि उनी माओवादीको अध्यक्ष जनमुक्ति सेनाको सुप्रिमो बने ।
उनै प्रचण्ड २०६५ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादी अर्थात (एमाओवादी) का अध्यक्ष भए । २०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका उनी २०७५ जेठ ३ गतेपछि नेकपाको अध्यक्ष भए ।
२०६३ सालको शान्ति प्रक्रियापछि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको माओवादीबाट २०६९ सालमा धेरै नेताले प्रचण्डको साथ छाडेर गए । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु मोहन वैद्य ‘किरण’, सिपी गजुरेल ‘गौरव’, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, हरिभक्त कँडेल ‘प्रतिक’, देव गुरुङ ‘कान्छाबहादुर’, पम्फा भुषाल, धमेन्द्र बाFस्तोलालगायत नेताले प्रचण्डको साथ छाडेर गए । ती मध्य थापा, गुरुङ र भुषाल पुनः प्रचण्डको पार्टीमा फर्के । हाल गुरुङ र भूषाल प्रचण्डसँग भए पनि थापा अहिले एमालेमा पुगेका छन् ।
त्यसलगत्तै नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्का वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डको साथ छाडे । भट्टराईसँगै हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेल, वामदेव क्षेत्री, भक्तबहादुर शाह, गंगा श्रेष्ठ, देवेन्द्र पराजुली, कुमार पौडेल, कल्पना धमलालगायत जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरुले पनि प्रचण्डको साथ छाडे । अहिले पौडेल, क्षेत्री, धमला र पराजुली पुनः प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्दैछन् ।
यसरी कुनै समयका ‘सुप्रिमो’ प्रचण्ड अहिले सहयोद्धाको साथविहिन अवस्थामा एमालेको माधव नेपाल समूहको साथ खोज्दै राजनीतिक यात्रामा निरन्तर लागिरहेका छन् ।